Gaas: Haddii aan Canshuur la Bixin Hormarna Warkiisa Daa! – Radio Daljir
Gaas: Haddii aan Canshuur la Bixin Hormarna Warkiisa Daa!
Luulyo 14, 2017 9:57 g 0
Madaxweyne Gaas oo maanta oo Jimce ah kula hadlay warbaahinta aqalka madaxtooyada ayaa ka hadlay arimo badan oo kuseeya canshuuraha isagoo soo qaatay buuqii maalmahan ka dhex taagnaa ganacsatada iyo dawlada magaalada bosaaso ee xarunta gobolka bari.
Madaxweyne gaas ayaa bulshada puntland ugu baaqay inay bixiyana canshuurta dawlada taas badalkeedana ay dawladu ku shaqeyndnta rabitaanka shacabka isagoo shegay in dawladu ay ku hawlan tahay mashariiic horumarineed ooo dalkan laga fulinayo iyo kuwa hada asocda ayna suurat gal ahayn hadii shacabku aysan canshuurta bixin in la dawladu horu mar gaarto.
Dadka reer bosaaso oo ganacsatada ah ayuu ugu baaqayy una sheegay inaysn dawladu dhaafeyn canshuurta sharciga ah taasna laga rabo inay garwaaqsadan dadka ganasatada ahi.
Madaxweynhu wuxu kale sheeegay in magaalada bosaaso dhawaan uu ka bilaami doono mashurca biya galinta ugu weyn puntland sida uu sheegay ayna hada ka socdan sida uu shegay mashriic ay ka mid yihiin kuwa kalluumeysi .
Madaxweynahha oo arimahaas ka hadlay ayaa waxa hadalkiisii ka mid ahaa:
Buurta Puntland: Madaxweyne Gaas oo ka Hadlay Xiriirka Canshuur Bixinta iyo Hormarka